Football Khabar » पहिलो हाफमा ब्राजिलविरुद्ध अर्जेन्टिनालाई १–० को अग्रता : मेस्सी पेनाल्टीमा चुके !
पहिलो हाफमा ब्राजिलविरुद्ध अर्जेन्टिनालाई १–० को अग्रता : मेस्सी पेनाल्टीमा चुके !
काठमाडौं, कात्तिक ३०
अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा अहिले दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रका दुई बलिया देश ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको खेल जारी छ । साउदी अरेबियाको अल साउद युनिभर्सिटी स्टेडियममा जारी खेलको पहिलो हाफमा अर्जेन्टिनाले सुरुआती अग्रता लिएको छ ।
पहिलो मिनेटबाटै आक्रामक बनेको खेलको नवौं मिनेटमा ब्राजिलले पेनाल्टी पायो । बक्समा अर्जेन्टिनी डिफेन्डरले ब्राजिलका ग्याब्रिएल जेससलाई लडाएपछि रेफ्रीले ब्राजिललाई सोझै पेनाल्टी दिए ।
तर, जेससले पर्खिएर हानेको स्लो पेनाल्टी पोलभन्दा बाहिरबाट गएपछि ब्राजिल खेलमा अग्रता लिनबाट चुकेको थियो । त्यसको ३ मिनेटमै अर्जेन्टिनाले पेनाल्टी पायो । बक्समा ब्राजिलका लेफ्ट ब्याक एलेक्स सान्ड्रोले कप्तान लिओनल मेस्सीलाई बक्समा लडाएपछि रेफ्रीले अर्जेन्टिनालाई पेनाल्टी दिए ।
तर, कप्तान मेस्सीले पेनाल्टी मिस गरे । ब्राजिलका गोलकिपर एलिसन बेकरले मेस्सीको पेनाल्टी छेके । तर, रि–बाउन्ड बलमा मेस्सीले ट्याप गर्दै गोल गरेपछि खेलमा अर्जेन्टिनाले खेलमा १–० को अग्रता बनायो ।
प्रकाशित मिति २९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार २३:३१
दुई वर्षपछि बोटेङले यसरी सम्झिए मेस्सीलाई
युभेन्टसविरुद्ध गोल गरेपछि रोनाल्डोको सेलिब्रेसन कपी गरे अनि खेलपछि जर्सी मागे …….
फिफाद्वारा ‘द बेस्ट’ अवार्डका लागि मनोनयन सार्वजनिक : विधागत सूचीसहित
च्याम्पियन्स लिगमा रोनाल्डोका नाममा एकसाथ तीन कीर्तिमान
इन्टर मिलानसँगको खेल हाम्रा लागि फाइनलसरह : जिदान
रोनाल्डोद्वारा मेस्सीको रेकर्डसँग बराबरी
च्याम्पियन्स लिग : रियल मड्रिडविरुद्ध ‘गर कि मर’ को स्थितिमा खेल्दै इन्टर मिलान
च्याम्पियन्स लिगमा आज विभिन्न ८ खेलहरू हुँदै
फर्नान्डेज चम्किँदा म्यानचेस्टर युनाइटेडको शानदार जित
च्याम्पियन्स लिग : हल्यान्ड चम्किँदा डर्टमुन्डको शानदार जित